Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Fainting သွေးမြင်ရင် မူးမေ့တတ်သူ
Fainting သွေးမြင်ရင် မူးမေ့တတ်သူ
11 Apr 11, 22:22
ကျတော့် အမျိုးသမီး အသက်က (၂၄) နှစ်ပါ၊ (၂၂) နှစ်တုန်းက ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျလို့ သားအိမ်ခြစ်ဘူးပါတယ်။ သားအိမ် ခြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ထိခိုက်ရှနာ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ သွေးထွက်လာတာမြင်ရင် ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် ချင်သလို ဖြစ်နေပြီး ပျို့ပြီး အန်ချင်လာသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာပါလည်း၊ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ရမယ် ဆိုတာကိုလည်း ညွှန်ကြားပေးပါဦး။
တိုင်းရင်းသားစကားအပြင် ဗမာစကားလဲတတ်တဲ့ ပညာအခြေခံလဲ အတော်အတန် ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည် မိန်းကလေးတွေကို စည်းရုံးရတယ်။ "ထောက်ပံ့ကြေးတော့ မပေးနိုင်ပါ၊ ဆေးခန်းမှာ ဆရာမလာလုပ်ပါလား။" အချိန်လဲပေးနိုင်၊ ဝါသနာလဲပါ၊ ဒါနဲ့မရသေးတာက သွေးမြင်ရင် မမူးချင်မှ ဆရာမ လုပ်လို့ ရတယ်။
လူကောင်း ပကတိကနေ ရုတ်တရက် မူးပြီး သတိမေ့တာဟာ Shock ပါဘဲ။ (ရှော့ခ်) တွေက အမျိုးအစား များတယ်။ နှလုံးနဲ့ သွေးကြောတွေ လိုသလောက် အလုပ်မလုပ်နိုင်တာကနေ ဖြစ်တယ်။ လူ့ကိုယ်က အရေးပါတဲ့ အင်္ဂါတွေတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ အောက်စီဂျင် မလုံလောက်လို့ ဖြစ်လာစေတယ်။ အသက်ဆုံးပါးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
1. Anxiety, restlessness and fainting စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာ၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်လာ၊ မူးလဲမယ်။
2. Nausea and vomiting ပျို့ချင်-အန်ချင်လာမယ်။
3. Excessive thirst ရေငတ်လာမယ်။
4. Eyes are vacant, dull, dilated pupils မျက်စိကဝေဝါး၊ သူငယ်အိမ် ကျယ်လာမယ်။
5. Shallow, rapid, and irregular breathing အသက်ရှူတာ တိမ်-မြန်-မမှန်ဖြစ်မယ်၊
6. Pale, cold, moist skin အရေပြား အေးလာ၊ ဖြူရော်လာ၊ စိုထိုင်းလာမယ်၊
7. Weak, rapid, or absent pulse လက်ကောက်ဝတ် သွေးခုန်တာ မြန်မယ်၊ စမ်းမရဖြစ်မယ်။
တလောက မွေးလူနာ လာစောင့်တဲ့ ကလေးအမေတယောက် လူနာကို အားပေးနေရင်း အသံတိတ်သွားတာကို သတိထားမိတယ်။ ခဏအကြာ ကိုယ်ဝန်ဗိုက်ပေါ်မှာ မှောက်လျက်သား ဖြစ်နေတာ လှမ်းမြင်ရတော့ အော် ခရစ်ယာန်လို ဆုတောင်းပေးနေသလားပေါ့။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ မူးပြီး သတိလက်လွတ် ဖြစ်နေရှာတယ်။ သွေးတောင် မြင်ရတာ မဟုတ်သေးဘူး။
• Psychogenic Shock စိတ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ (ရှော့ခ်)၊ ကြောက်စိတ်များ၊ အပျော်လွန်၊ ဒေါသကြီး၊ ပူပန်မှု လွန်ကဲရာကနေ ဖြစ်တယ်။ သွေးကြောတွေ ကျယ်လာတယ်။ ဦးနှောက်ကို သွေးအရောက်နည်းတယ်။ သွေးဖိအား ကျမယ်၊ အရေပြား အေးစက်နေမယ်။ ချွေးပြန်မယ်။ နှလုံးခုန် မြန်မယ်။ သတိ တဝက်တပျက် မရတာနဲ့ လုံးဝသတိမရတာ ဖြစ်မယ်။
• Anaphylactic Shock (အနာဖလက်တစ်-ရှော့ခ်)၊ မတည့်တာနဲ့ ထိတွေ့ရာကနေဖြစ်တယ်။ ယားယံလာမယ်၊ အနီပိန့်တွေထွက်မယ်၊ အသက်ရှူခက်လာမယ်၊ ဆီးသွားချင်-ဝမ်းသွားချင်ဖြစ်လာမယ်။ ပူလောင်လာသလို ခံစားရမယ်၊ အသံပျောက်မယ်။ ဆေး၊ အဆိပ်၊ အင်းဆက်၊ အမှုံအမွှား၊ အစားအသောက်၊ စတာတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။
1. Maintain open airway အသက်ရှူလမ်း စစ်ရ၊ ပြင်ရမယ်။ ပိတ်ဆို့နေတာ မရှိစေနဲ့။ လည်ပင်းဆန့်၊ မေးကိုပင့်ပါ။
2. Control bleeding သွေးယိုတဲ့နေရာကို သွေးမထွက်အောင်လုပ်ပါ။ ဖိထားပေးပါ။ မြှင့်ထားပေးပါ။ ပတ္တီး-ကြိုးနဲ့ စည်းထားပေးပါ။ Artery forceps သွေးကြောညှပ် ရှိရင်-လိုရင် သုံးပါ။
3. Position ခြေထောက်ပိုင်းကို ခေါင်းအထက်မှာ မြှင့်ထားပါ။ အန်နေရင် ခေါင်းတဖက် စောင်းထားပါ။ ခေါင်း-လည်ပင်း ကျိုးရင်-ကျိုးတယ် ထင်ရင် ပက်လက်အနေအထားမှာသာ ထားပါ။
4. Splint အရိုးကျိုးရင် အမာတခုခုနဲ့ ကြပ်စည်းပါ။ ဆွဲမဆန့်ပါနဲ့။
5. သက်တောင့်သက်သာ နေပါစေ။ အေးနေရင် စောင်စတာနဲ့ နွေးအောင် ခြုံပေးပါ။ စို-အေး နေတာတွေ ဖယ်ရှားပါ။ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ အနွေးပေးတာမျိုး မသုံးပါနဲ့။
6. လူနာကို စိတ်ငြိမ်အောင် အားပေးနှစ်သိမ့်ပါ။ သူ့အနာဒဏ်ရာကို မမြင်စေပါနဲ့။
7. Give nothing by mouth အန်နေလျှင်၊ အဆိပ်စတာ မသေခြာလျှင် ပါးစပ်က ဘာမှ မတိုက်ပါနဲ့။ အာခေါင်ခြောက်-ရေဆာရင် နှုတ်ခမ်းကိုသာ ရေဆွတ်ပေးပါ။
8. Request medical assistance ဆေးပညာ တတ်ကျွမ်းသူ အကူအညီခေါ်ပါ။
အင်္ဂလန်မှာ (ဗီတိုရိယား) ခေတ်တုံးက အမျိုးသမီးတွေ၊ မိန်းကလေးတွေ ဒါမျိုးသိပ်ဖြစ်ကြတယ်။ ကိုယ်ကြပ် Corsets အဝတ်အစားတွေကြောင့် အသက်ရှူကြပ်တာလဲ ပါနိုင်တယ်။ တခြား မူယာ-မာယာလဲပါမယ်။ ခဏခဏ မူးလဲကြလို့ Fainting game လို့ ခေါ်ရလောက်အောင် လူစည်စည်မှာ လှလှပပလေး လဲကြတာများတယ်။ အမေရိကားမှာ ဖြစ်ရင် Choking game လို့ ခေါ်တယ်။
3 Bs for First Aid ရှေးဦးသူနာပြု အဓိကကြွမ်းကျင်မှု (ဘီ ၃ ခု)
ABC of First Aid ရှေးဦးသူနာပြုခြင်း (အေ၊ ဘီ၊ စီ)
• အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်နေ-မနေကို စစ်ဆေးပါ။ လူနာကို မာတဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်ထားပါ။
• လည်ပင်းကျိုးခြင်း ရှိ-မရှိကြည့်ပါ။ လည်ပင်းကို ဆန့်ထုတ်ပါ၊ မေးစေ့ကို မတင်ထားပါ။
• လျှာက အသက်ရှူလမ်းကို ပိတ်မနေအောင် လုပ်ပါ။
လူနာက အသက်ရှူနေခြင်း ရှိ-မရှိကို ပါးစပ်၊ ရင်ဘတ်နှင့် ဝမ်းဗိုက် လှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်ပြီး စစ်ဆေးပါ။ မရှိရင် ချက်ချင်း Mouth-to-mouth ပါးစပ်တေ့ လေမှုတ်သွင်းနည်း လုပ်ပေးပါ။
လည်ပင်း (ကရောတစ်) သွေးလွှတ်ကြောကို စမ်းပါ။ သွေးခုန်တာ မတွေ့ရရင် (စီ-ပီ-အာရ်) လုပ်ပါ။
D for Defibrillation နှလုံးခုန်စေတဲ့စက်ကို အသုံးချခြင်း
• ပါးစပ်၊ အာခေါင်၊ လည်ချောင်းထဲ ပစ္စည်းတွေ (အမှိုက်၊ အန်ဖတ်၊ အဝတ်စ) ဆို့ပိတ်နေရင် ဖယ်ရှားပါ။
• လူနာကို ပက်လက်လှန်ထားပါ။ မာတဲ့ ကြမ်းပြင်က ပိုကောင်းတယ်။
• လူနာရဲ့ လည်ပင်းကို ဆန့်ပြီး မေးစေ့ကို အထက် (ရှေ့ ) ကို မ-တင်ပေးပါ။
• လူနာရဲ့ပါးစပ်ကို ဖွင့်ထားပါ၊ ကိုယ် လေတဝကြီး ရှူလိုက်ပြီး၊ လူနာရဲ့ ပါးစပ်ကို မိမိပါးစပ်နဲ့ တေ့ပိတ်ပြီး လေသွင်းပေးပါ။
• ပါးစပ် ဖွင့်ရရင် နှာခေါင်းကို မိမိလက်နှင့်ပိတ်ပြီး၊ ပါးစပ်ကနေ လေသွင်းပါ၊ ပဌမ (၂)ကြိမ်လုပ်ပါ။ အချိန်တစ်စက္ကန့် သာကြာမယ်။
• လူနာရဲ့ အဆုပ်ကို လေဘူဘောင်းလို အတင်းဖေါင်းသွားအောင် လုပ်ရန်မလိုပါ။
• နှစ်ကြိမ်လုပ်ပြီး ပြန်လည်ရှူလာမယ်။ မရှူသေးရင် (စီ-ပီ-အာရ်) လုပ်ပါ။
နှလုံး-အဆုပ်ရုတ်တရက် ရပ်သွားစေတတ်သည့် အကြောင်းတွေကတော့ -
• လူနာကို မာတဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ထားပါ၊
• မိမိက လူနာရဲ့ ဘေးမှာ ဒူးနှစ်ဖက် ထောက်ပြီး ထိုင်ပါ။
• လူနာမှ တင်းကြပ်နေတဲ့ အဝတ်အစားတွေ လျော့ပါ-ဖယ်ပါ။
• မိမိ၏ လက်ဝါး နှစ်ဖက်ကို ထပ်ပြီး၊ လူနာရဲ့ ရင်ပတ် အလယ်တည့်တည့် နို့ အုံနှစ်ဖက်ရဲ့ အလယ်၊ ရင်ညွန့် ရိုး အပေါ်မှာ တင်ပါ၊
• မိမိ၏ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့် တန်းထားပြီး၊ မိမိ၏ ကိုယ်အလေးချိန်ကို မိမိလက်နှစ်ဖက်အပေါ် ပြောင်းရွှေ့ ပြီး၊ မိမိရဲ့ လက်ပါးနှစ်က လူနာရဲ့ရင်ပတ်ကို ဖိချပေးရမယ်။
• နှစ်လက်မခန့် ကျသွားအောင် ဖိလိုက်ပြီးနောက် လုံးဝကြွလိုက်ရမယ်။
• တမိနစ်လျင် အကြိမ် ၁ဝဝ နှုန်းဖြင့် ထိုအတိုင်း ဖိလိုက်-ကြွလိုက် လုပ်ရမယ်။
• အကြိမ် ၃ဝ လုပ်ပြီးတိုင်း၊ ပါးစပ်က လေသွင်းတာ (၂)ခါ လုပ်ရမယ်။
• ရင်ပတ် ဖိ-ကြွခြင်းနဲ့ ပါးစပ်က လေသွင်းတာ စုစုပေါင်း (၂)မိနစ် ဒါမှမဟုတ် (၅) ပါတ် လုပ်ရမယ်။
• အသက်ရှူလမ်း စစ်ဆေးပါ။ ပိတ်နေလျှင် ဖွင့်ပါ။
• လေနှစ်ကြိမ် ညင်သာစွာ သွင်းပေးပါ။ ကလေးရဲ့ ပါးစပ်ရော နှာခေါင်းပါ မိမိ၏ ပါးစပ်က ငုံပိတ်လျှက် လေသွင်းပါ။
• ကလေးရဲ့ ရင်ပတ်ပေါ် မိမိလက်ဝါးနှစ်ဖက် ထပ်တင်ပြီး ကလေးရင်ပတ်၏ သုံးပုံတပုံ ပြားသွားအောင် ဖိပေးပါ။
• တမိနစ်မှာ အကြိမ် ၁ဝဝ နှုန်း၊ အခါ ၃ဝ လုပ်ပြီးတိုင်း ပါးစပ်က လေသွင်းရမယ်။
• လူကြီးတွေလို အကြိမ် ၃ဝ ဖိပြီးတိုင်း၊ လေနှစ်ခါမှုတ်သွင်းပေးရမယ်။
• စုစုပေါင်း (၂) မိနစ် ဒါမှမဟုတ် (၅) ပါတ် လုပ်ရမယ်။